May 11, 2018Ye Tay Zar Shein IT
Mar 27, 2018Ye Tay Zar Shein Business
Business failure isn't something you want to think about when you startabusiness. But according to the SBA, about one-fifth of business startups fail withinayear. Here are7reasons why small businesses fail and the ways your business can avoid failing.
Mar 26, 2018Ye Tay Zar Shein Business
Entrepreneur ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ စီမံခန့်ခွဲမှုစာအုပ် အတော်များများမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တွေ့ရများတဲ့ သည်းခြေကြိုက် စကားလုံးတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ Entrepreneur လို့ပြောလိုက် ရင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် မာ့ခ်ဇူကာဘတ်၊ Apple ရဲ့ ဖခင်ကြီး စတိဗ်ဂျော့စ်တို့ကိုပြေး မြင်ကြမှာပါဘဲ
Dec 23, 2017Ye Tay Zar Shein Business
ကျွန်တော်ဟာ တစ်သက်လုံးပညာရှာဖွေမှုကို အလေးထားခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘာဖြစ်ချင်သလဲလို့မေးရင် ပညာတတ်ဖြစ်ချင်တယ် လို့ပဲ ဖြေမိတယ်။ ပညာလို့ပြော ပြန်ရင်လည်း အမှန်တော့ အတန်းပညာ ကို ရည်ညွှန်းနေတာကို နောင်မှသတိပြုမိတယ်။
Dec 11, 2017Ye Tay Zar Shein Uncategorized
Choose The Smartest Person In This Photo & See What Your Choice Reveals About You
Nov 30, 2017Ye Tay Zar Shein New & Updates
Our choices sayalot about who we are. For example, when you tell someone what your favorite color is, they’ll often respond with either surprise oramore passive understanding. “Oh wow, I didn’t take you for an orange type of person,” or “Oh yeah, I can totally see you liking blue the best.”
Nov 07, 2017Ye Tay Zar Shein New & Updates
အချိန်ကလည်း အကုန်မြန်လိုက်တာ။ အသက်ကြီးလာလို့ထင်ပါရဲ့။ အချိန်ကာလ ကို ပိုပြီး သတိထားလာတယ်။ တန်ဖိုးထားလာတတ်တယ်။ ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ အတူ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တာ ၁၀ နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီ။
Oct 29, 2017Ye Tay Zar Shein New & Updates
ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးဆောင်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့က မြန်မာငွေ USD $1000 လဲပေးထားတယ်။ ဟိုမှာ လိုအပ်ရင်ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံကို သူတို့ငွေကြေးနဲ့ ဖလှယ်ပြီး သုံးစွဲနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးတဲ့ သဘောပါ။ မသုံးရင်လည်း ရပါတယ်။ ကျွန်တောက တက်နိုင်ရင်ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံကို မသုံးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ မရပါဘူး။
သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ ဂန္တဝင်ကြီးတွေကို နောက်ကွယ်မှ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ ဒုတိယလူ
Oct 27, 2017Ye Tay Zar Shein New & Updates
ကုမ္ပဏီတစ်ခု အောင်မြင်သွားရင် လူ့ရှေ့ထွက်လေ့ရှိတဲ့သူတွေပဲ နာမည်ကျော်သွားတတ်တယ်။ အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့ အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်သွားအောင် နောက်ကွယ်က ကြိုးစားပန်းစားလုပ်ကိုင်ပြီး ရိုးရိုးအေးအေး နေတတ်တဲ့သူတွေကို မသိကြတော့ဘူး။
Oct 21, 2017Ye Tay Zar Shein IT
The term “IoT” stands for Internet of Things isamost significant topic in the engineering, technology, industry, etc. It has become front-page news in both the press and media. This technology is alive inawide spectrum of systems, sensors and networked products.
Oct 14, 2017Ye Tay Zar Shein Business
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ပြောခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အပိုင်းကို ဆက်လက်ပြောချင်ပါတယ်။